Ukunweba Ukufinyelela Kwedijithali kumhlaba wokuqala weselula, wePost-Cookie | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 25, 2020 NgoLwesine, Juni 25, 2020 Douglas Karr
Njengoba isimilo sabathengi siqhubeka nokuqhubekela phambili kakhulu kumadivayisi eselula, abathengisi bomkhiqizo ngokufanayo bashintshe ukugxila kwabo kumasu wokumaketha eselula. Futhi, njengoba abathengi basebenzisa kakhulu izinhlelo zokusebenza kumafoni abo ahlakaniphile, akumangazi ukuthi ukukhangisa okungaphakathi nohlelo kuyala isabelo sebhubesi semali yokukhangisa yeselula. Ukuchithwa kwangaphambi kwesifo esiwumshayabhuqe, ukusetshenziswa kwezikhangiso ngomakhalekhukhwini kwakusendleleni yokubona ukwanda ngamaphesenti angama-20 ngo-2020, ngokusho kweMarketer
Kepha ngabantu abaningi kangaka abasebenzisa amadivayisi amaningi nemithombo yezindaba edlayo ngezindlela eziningi ezahlukahlukene, kufakazelwa ukuthi kuyinkinga kubakhangisi ukuqonda ubunjalo bomthengi kuyo yonke indawo yabo yedijithali. Amakhukhi avela eceleni abeyindlela eyinhloko yokuxhumana nabathengi ngeziteshi zenhlalo nezedijithali; noma kunjalo, amakhukhi abe ngaphansi kwemikhawulo ekhulayo evela kubahlinzeki abakhulu beziphequluli ezifana ne-Google, i-Apple neMozilla. Futhi iGoogle imemezele ukuthi izokhipha amakhukhi wenkampani yangaphandle ku-Chrome ngo-2022.
Omazisi Bokukhangisa Kwamaselula
Njengoba abathengisi bohlobo lomkhiqizo befuna ezinye izindlela zokukhomba abathengi endaweni ye-post-cookie, abathengisi manje sebeshintsha amasu abo edijithali omazisi bokukhangisa beselula (ama-MAID) ukuxhumanisa isimilo sabathengi kuwo wonke amadivayisi. Ama-MAID ayizihlonzi ezihlukile ezinikezwe yonke idivayisi yeselula futhi ahlanganisa ama-MAID nezimpawu ezibalulekile ezinjengobudala, ubulili, ingxenye yemali engenayo, njll.
Idatha yomthengi engaxhunyiwe ku-inthanethi ngokwesiko abathengisi abathembele kuyo njengezinombolo zocingo, amakheli, njll. Ayikwazi ukufaniswa nokwakhiwa kwephrofayili ngedatha yedijithali kuphela. Ukulungiswa kobunikazi kusiza ukugcwalisa leli gebe futhi kusebenze ama-algorithms anzima ukunquma ukuthi ngabe izimpawu zomazisi ezisemqoka zonke zingezomuntu oyedwa yini. Izinkampani ezinjengochwepheshe wokulawulwa kobunikazi babathengi i-Infutor zakha lezi zinhlobo zobunikazi obuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. I-infutor ihlanganisa idatha yabathengi ehambisana nobumfihlo, kanye nedatha evela kweminye imithombo ehlukanisiwe efana nedatha yesigaba sempilo yomuntu wesithathu nedatha yomkhiqizo yeqembu lokuqala, bese iyayihlanganisa ibe yiphrofayili enamandla yomthengi.
Kwethulwa ama-ID wesamba esiphelele eselula avela ku-Infutor
Isixazululo se-Infutor sikaTotal Mobile Ad IDs kuyindlela ebalulekile yokusiza abathengisi ukugcwalisa igebe lobunikazi be-post-cookie ngokufanisa ama-ID wokukhangisa angaziwa, angewona ama-PII namakheli e-imeyili asheshe. Lokhu kwenza abathengisi bakwazi ukwakha amaphrofayili wobuntu ahambisana nobumfihlo futhi kuqinisekise ukuthi bafinyelela kubanikazi bedivayisi abafuna ukufinyelela kubo.
Inikwe amandla yi-TrueSource yayoTM Igrafu yedivayisi yedijithali, ama-ID e-Infutor's Total Mobile Ad ID afaka ukufinyelela kumadivayisi wedijithali ayizigidi ezingama-350 namabhilidi ama-imeyili angama-2 billion MAID / hashed. Le-ID Yesikhangiso Seselula ne-imeyili esheshayo (MD5, SHA1, ne-SHA256) ihambisana nobumfihlo, itholakale ngokuvunyelwe. Lezi zikhombi ezingaziwa zivikela imininingwane ekhomba umuntu uqobo (PII) ngenkathi zisiza abakhangisi ukuxazulula nokuxhuma ubunikazi bomthengi wedijithali kuwo wonke amapulatifomu nangaphakathi kwegrafu yabo yobunikazi benkampani yokuqala.
Ama-ID wesikhangiso esiphelele akwa-Infutor Isixazululo sinikeza abathengisi isendlalelo esingeziwe sokuphepha nokufinyelela ngokushesha ekuxazululeni ubunikazi okusheshayo. Isixazululo sinikeza obunye ubukhulu bedatha eyandisa ukufinyelela kwabakhangisi ngobunikazi bedijithali nokuxazululwa kwamadivayisi ngenkathi kugcinwa ukulawula i-PII yokuqala. Lokhu kunika amandla ukuthunyelwa kwemilayezo okungaguquguquki kwe-omnichannel ngokuthuthukisa ukuhlukaniswa kwezethameli nokwenza ngezifiso umuzwa onenzuzo wabathengi.
Imininingwane ephelele yama-ID weselula ihlanzwa kabuhlungu futhi itholakala kuzinhlelo zokusebenza ezisuselwa kwimvume ngemithombo eminingi ethembekile, eqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu yedatha yedijithali. I-Confidence Score (1-5) isebenzisa i-algorithm yokuphathelene kusetshenziswa izinto ezinjengemvamisa kanye nokubuyela emuva kwamabili we-MAID / hash abonwa ndawonye, ​​ngaphezu kwe-syntax nokunye ukuqinisekisa ukuze abathengisi bazi ukuthi kungenzeka ukuthi umbhangqwana uyasebenza.
Ukubeka idatha yama-MAID ukusebenza
Ipulatifomu yokushintshaniswa kwedatha i-BDEX ihlanganisa idatha kusuka emithonjeni eminingi futhi iyayihlanza ngokuqinile ukuqinisekisa ukunemba nemali yegrafu yayo. I-BDEX Identity Graph ifaka ngaphezu kwamasiginali ezigidigidi zamadatha futhi inika amandla abathengisi ukukhomba umthengi ngemuva kwesiginali ngayinye yedatha.
Ngokubambisana ne-Infutor, I-BDEX kufakwe idatha yesisombululo se-Total MAIDs ekushintshaneni kwedatha. Lokhu kukhulise ivolumu yedatha yobunikazi yedijithali ye-BDEX ukuhlinzeka ngemikhiqizo nabakhangisi ngokufinyelela kuqoqo oluphelele lwe- Ama-imeyili we-MAID / ashes. Ngenxa yalokhu, i-BDEX iqinise idathasethi yedijithali engayinikeza amaklayenti ngokwandisa kakhulu inani lama-ID wesikhangiso eselula futhi yachitha amakheli e-imeyili endaweni yonke.
Ezweni ledatha elifuna ezinye izindlela zokuqondiswa kwedijithali okusekwe kukhukhi, ubambiswano lwe-BDEX-Infutor lufike ngesikhathi esifanele. Ukushintshaniswa kwedatha yethu kwakhiwe ukunika amandla ukuxhumana kwabantu kanye ne-Infutor's Total Mobile Ad ID Solution ukwengeza okuqinile ukusisiza ukufeza lesi sidingo semakethe esikhula ngokushesha.
UDavid Finkelstein, isikhulu esiphezulu se-BDEX
Finyelela ku Ama-ID wesikhangiso esiphelele akwa-Infutor Isixazululo, esingethwe kusayithi futhi esitholakala kumafrikhwensi amaningi wokulethwa, siyinqobe yabathengisi abafuna idatha ephelele kakhulu neyamanje yokuxazulula ubunikazi. Abakhangisi basebenzisa le datha yeselula ecebile ukukhulisa ukufinyelela kwabo ngokusebenzisa ubunikazi bedijithali ukukhomba abathengi kuwo wonke amadivayisi eselula, ukudala imiyalezo ye-omnichannel engaguquguquki, ukwenza ngcono amanani okugibela kokukhonjwa kwedijithali nohlelo nokunikeza amandla ukuxhumanisa kwedivayisi nokuxazululwa kobunikazi.
Phakathi ku mobile-kuqala, i-post-cookie umhlaba, abathengisi bedijithali abaphumelela kakhulu basebenzisa idatha yegrafu yesazisi nokulungiswa kobunikazi ukuhlinzeka ngokuqhubeka kuwo wonke amadivayisi kanye nesipiliyoni esenzelwe wena uqobo abathengi abasifunayo. Idatha ye-Robust MAIDs ibalulekile ekuthuthukiseni ukuxazululwa kobunikazi kanye nokwakhiwa kwephrofayili okungaxhunyiwe ku-inthanethi endaweni ye-post-cookie futhi inikezela ukuvumelana okudingekayo okuthuthukisa amazinga wokuguqulwa futhi kukhulise i-ROI yemali yokukhangisa yedijithali.
Funda Kabanzi Mayelana Ne-Infutor's Total Mobile Ad ID Solution
Tags: ama-ad adI-BDEXkunciphe amakhukhiAma-ID wesikhangiso esiphathekayo se-Infutorumsikaziamantombazaneisihlonzi sesikhangiso seselulaama-id wesikhangiso eselulamobile-kuqalaon-premiseInani lama-ID wesikhangiso seselula